Kaitlyn Bristowe သည် 'ကြယ်များနှင့်ကခုန်ခြင်း' ကိုပူးပေါင်းသည် - သတင်း
ဆံပင် Celeb စတိုင် နိုင်ငံတကာ အိန္ဒိယ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု #actagainstabuse ရေရှည်တည်တံ့သောမီးဖိုချောင် သတင်း Celeb ကြည့်ပါ ကြံ့ခိုင်ရေး
Chris Harrison သည် Bachelorette ဟောင်း Kaitlyn Bristowe အတွက်အံ့သြစရာကြီးဖြစ်သည်
ဒါဟာတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်: ဟောင်းများ Bachelorette Kaitlyn Bristowe ၏သွန်းပူးပေါင်းနေသည် ကြယ်နှင့်အတူကခုန် ရာသီ ၂၉ ။
ခရစ် Harrison ၏နောက်ဆုံးညဥ့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲစဉ်အတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းကြေညာခဲ့သည် The Bachelor - အကြီးမြတ်ဆုံးရာသီများ - အစဉ်အဆက်! Bristowe ပူးပေါင်းလိုသောခဲ့ပြီးနေစဉ် DWTS အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာဘို့, Bachelor Nation အိမ်ရှင်ချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းမှမဖြတ်ခဲ့ပါဘူး အဲဒီအစားသူမက Bristowe ကိုသူမရည်းစား Jason Tartick အဆိုတင်သွင်းဖို့လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။ (ဗေ့ခ်ျ။ )
Dancing the Stars (@dancingabc) မှမျှဝေသော post တစ်ခု။ 8:00 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 15, 2020 တွင်
ဗီဒီယိုစကားပြောနေစဉ်အတွင်း Harrison သည် Tartick ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးစကားပြောဆိုရန်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူမ Tartick အိမ်ရှင်ရဲ့အံ့အားသင့်စရာအပေါ်ဖြစ်အံ့သောငှါသဘောပေါက်လာသောအခါ Bristowe (တစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် dancer ဖြစ်လေ့ရှိတယ်) အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။
သူကခန့်အပ်ခံဝန်ကြီးတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီးနောက်, Harrison ကဆက်ပြောသည်အားလုံးအလေးအနက်ထား, ငါသည်သင်တို့အတွက်အလွန်အစစ်အမှန်မေးခွန်းတစ်ခုကို, Kaitlyn ရှိသည်။ ဒါကမင်းရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတော့မယ့်အကြောင်းငါမင်းကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိစေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဘာလဲ?! Bristowe က Tartick ကိုမသွားခင်မေးခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းသိလား
နောက်ဆုံးတွင် Harrison သည် Kaitlyn ကိုယိုဖိတ်ခဲ့သည်။ နောက်ရာသီတွင်သင်ဖြစ်လိမ့်မည် ကြယ်နှင့်အတူကခုန် ?
ပုံမှန် Bristowe ဖက်ရှင်တွင်သူမသည်ဟုတ်ကဲ့မဖြေဆိုမီဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လှည့်စားခဲ့သည်။ ငါဟာ Bachelorette ဖြစ်တယ်လို့မင်းကိုပြောခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ဆီပြန်ရောက်ပြီလို့ခံစားရတယ်။ ဒါကမင်းပြောလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာကမ္ဘာမှာနောက်ဆုံးသော့ချက်ပဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏အလုပ်လွှဲပြောင်းဖို့ငါ့ကိုမေးမယ့်ခဲ့ကြသည်ထင် ... ငါမသိရပါဘူး။
ရာသီ 28 ရက်နေ့တွင်ဟန္နဘရောင်းရဲ့အနိုင်ရရှိပြီးနောက် ကြယ်နှင့်အတူကခုန် , Bristowe တွင်ဖြည့်ရန်ကခုန်သောဖိနပ်ကြီးများရှိသည်။
သက်ဆိုင်သော: Clare Crawley ၏ရာသီသည် 'The Bachelorette' ကိုဖျက်သိမ်းသလား။ ခရစ် Harrison ထွက်ပြော၏
P448 F9 စကိတ်စီးဖိနပ်
$ 298 အခုဝယ်ပါ
$ 131 အခုဝယ်ပါ
ဒေါ်လာ ၁၂ အခုဝယ်ပါ
Categories ပြည်တွင်း မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် ခေတ်ရေစီးကြောင်း
westworld ရာသီ2ဖြစ်စဉ်များ
သရဖူရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 8